Lufthansa na-ebuga Airbus A321s abụọ gbanwere kpamkpam na ndị na-ebu ibu
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany » Lufthansa na-ebuga Airbus A321s abụọ gbanwere kpamkpam na ndị na-ebu ibu
Ndị Lufthansa CityLine ga-arụ ọrụ ụgbọ elu a n'aha Lufthansa Cargo ma nọrọ na Frankfurt.
A na-eji ụgbọ elu na-adọkpụ ụgbọ elu dị ka ụgbọ elu naanị ibu na ụzọ ụgbọ mmiri na Europe.
Gbọ elu na-anata ibo ụzọ iji nye aka ibute igbe na nnukwu oche.
Freighter ga-arụ ọrụ site na Lufthansa CityLine.
Lufthansa Ibu na-etinye ego na mgbasa nke ikike ibu ya. Site na mbido 2022, ụlọ ọrụ ahụ ga-enye ndị ahịa ya ikike ọzọ na Europe site na ịtụgharị kpamkpam Airbus 321gbọ elu ụgbọ elu XNUMX n'ime ndị na-ebu ibu. Maka ebumnuche a, ụgbọ elu ejima ahụ ga - enweta ibo ụzọ buru ibu iji mee ka ibuga igbe dị na nnukwu oche. Na mbu, atumatu ntughari ugbo elu Airbus abuo. Ndị Lufthansa CityLine ga-arụ ọrụ ụgbọ elu a n'aha Lufthansa Cargo. Ha ga-anọ ọdụ na Frankfurt.
A na-ebu amụma maka uto maka mbupu eCommerce gafere na 20% kwa afọ maka afọ ise ọzọ. Ndị ahịa na-atụ anya oge nnyefe dị mkpirikpi maka ngwaahịa ha nyere iwu. Nke a na-achọkwa njikọ maka njikọ ụgbọelu na Europe.
“Lufthansa Cargo chọrọ ịnye ndị ahịa na ngalaba eCommerce ngwa ngwa njikọ intra-European. Site na ndị A321s gbanwere, anyị na-ezute ọnụ ahịa ndị ahịa anyị na-arịwanye elu maka azịza otu ụbọchị ma na-ewusiwanye njikọ anyị ike nke njikọ ụwa yana onyinye anyị na-enye, ”ka Dorothea von Boxberg, CEO nke Lufthansa Cargo kwuru. “Aircraftdị ụgbọ elu ahọpụtara nwere ike ibu 28t kwa ụgbọ elu, buru ibu buru ibu karịa na obere mkpụmkpụ nke ụgbọelu njem. Na mgbakwunye na ndị na-ebugharị, ndị na-emekọ ihe ọnụ na ndị na-arụ ọrụ nzipụ ozi, ndị na-eweta eCommerce ga-abụ ndị ahịa maka onyinye a, ”ka von Boxberg kwukwara.
"N'ihe karịrị afọ 60 nke ahụmịhe na njem ụgbọ elu Europe, Lufthansa CityLine na-anọchi anya arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya dị ka onye mmekọ dị mkpa na Lufthansa Group. Mgbanwe na arụmọrụ na ọsọ n'ịchọpụta na itinye n'ọrụ ohere ọhụrụ bụ ntọala azụmaahịa anyị. Anyị chọrọ iji àgwà ndị a jeere Lufthansa Cargo na ndị ahịa ya ozi, "Steffen Harbarth, Onye Isi Nchịkwa nke Lufthansa CityLine na-ekwu.
Airbus A321s (A321P2F) gbanwere na ndị na-ebu ibu na-enye ụgwọ ọrụ nke 28 tọn nwere oke nke kilomita 3,500. Ntughari ahụ na-enye ohere iji pallets ọkọlọtọ etinyere na nnukwu oche. Ejima-engine Airbus A321 bụ otu n'ime ndị kasị vasatail ugbo elu na klas na-enyere nnọọ oru oma continental arụmọrụ.